सहिदको अपमान नगरौँ !
सम्पादकीय सहिदको अपमान नगरौँ ! देशलाई पुनः अधिनायकवादको रसातलतर्फ घचेट्ने दुश्चेष्टा नसच्चिँदासम्म सहिदहरूको अपमान भइरहनेछ
देश संकटमा छ । मूलतः राजनीतिक कारणले । नत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक आधारमा नेपाल अभागी मुलुक होइन । यस्तै नेपाली जनता पनि अल्छी, काँतर वा बेइमान छैनन् । दुर्भाग्य, देशमा राज भने प्रायः जनद्वेषी र बेइमानहरूको हुँदैआएको छ । शासकहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको खाँचो हुन्छ । यसैले देशभक्त सपुतहरूले अधिनायकवादी शासनको अन्त्य गरेर लोकतन्त्र स्थापना गर्न ज्यानको बाजी लगाएर संघर्ष गरेका हुन् । राणाहरूको जहानियाँ हुकुमी शासनविरुद्ध पहिलो संगठित विद्रोहको बीजारोपण विसं १९९७ सालमा भएको थियो । त्यही विद्रोहका ४ जना नायकलाई निरंकुश शासकले मृत्युदण्ड दियो । तर, सहिदहरूको बलिदान खेर गएन । एक दशकभित्रै अर्थात् २००७ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनक्रान्तिबाट राणाहरूको हुकुमी शासन हट्यो ।
जनक्रान्तिको सफलतापछि गद्दी छाडेर भारत गएका राजा पनि फर्के । तर, नेपाली जनताको दुर्भाग्य राणाहरूले जस्तै हुकुमी शासनको रहर राजामा पनि पलायो । जनताको अधिकार खोसेर आफूमा केन्द्रित गर्न राजाले नै षड्यन्त्र गर्न थाले । जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान स्वीकार गर्ने घोषणा गरे पनि राजाले कार्यान्वयन गरेनन् । राजाले जारी गरेकै संविधानअनुरूप भएको संसद्को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत ल्यायो । तर, राजाको हुकुमी शासनको तृष्णा मेटिएको रहेनछ । सेनाको बलमा जनताको निर्वाचित सरकार भङ्ग गरेर लोकतन्त्रको भ्रूणहत्या गरे । त्यसपछि तीन दशक लामो संघर्ष गरे नेपाली जनताले लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि । सयौं नेपाली सपुतले आत्मोत्सर्ग गरे । अन्ततः २०४६ सालमा जनआन्दोलनका बलमा राजाको सक्रिय नेतृत्वमा सञ्चालित भनिएको पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो र लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भयो ।
लोकतान्त्रिक संविधान र निर्वाचन भएलगत्तै राजनीतिक दलहरूबीचमा र भित्रै पनि किचलो सुरु भयो । संसदीय व्यवस्थामा देखिने सबै विकृतिकाे अभ्यास नेपालका राजनीतिक नेताहरूले एक दशक बित्दा नबित्दै गरे । अर्कातिर आर्थिक सामाजिक विकासको गोरेटो पहिल्याउन लागेको मुलुकमा हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरियो ।दशक लामो हिंसा र आतङ्कले देशलाई जर्जर बनायो । राजाले पनि मौका छोपेर हुकुमी शासनको सुरु गरे । तर, जनचेतनाका कारण राजाको शासन स्वीकार गर्न जनता तयार भएनन् । दोस्रो जनआन्दोलन भयो । जननिर्वाचित संविधान सभाले नेपालको संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संविधान बनायो । त्यसअनुसार चुनाव भयो । अतः प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संविधानको अपव्याख्या र अपहेलना गरेर भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभा यसैले नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षको प्रतिफल हो । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जनादेशको दुरुपयोग गरेर जनतालाई धोका दिएको छ । सहिदको अपमान गरेको छ । देशलाई पुनः अधिनायकवादको रसातलतर्फ घचेट्ने दुश्चेष्टा नसच्चिँदासम्म सहिदहरूको अपमान भइरहनेछ ।
देशलाई अधिनायकवादी अन्धकारतर्फ घचेट्ने दुश्चेष्टाको आआफ्नो धर्मअनुसार विरोध, प्रतिवाद र निगरानीमा सक्रिय रहेर हामीले सहिदहरूको सम्मान गर्न सक्छौँ । सहिदहरूको सम्मान गरौँ !